HANI Waxay Niyad Jabtay Markii ay arintaan ka ogaatay Ninkeeda -Dhacdo Yaab leh - Hablaha Media Network
HANI Waxay Niyad Jabtay Markii ay arintaan ka ogaatay Ninkeeda -Dhacdo Yaab leh
HMN:- Waa mar kale iyo qeybtii ku caawi talaadada iyo bahda kalsantv24.com waxa ay todobaadkaan fariin talo raadin ah naga soo gaartay gabar ku sugan dalka Itoobiya , waxa ayna u dhigneyd sida tan. Mageceygu waa Saafi waxaan ku noolahay Magaalada Addis Ababa ee wadanka Itoobiya, aniga waxaan halkaan u joogaa sababo Buufis ah oo waxaa ii soo doodeysa walaashey, dhawaan ayaa waxaa deriskeyga soo noqdey wiil kaas oo isna u yimid halkaan arimo kuweyga la mid ah .
Xoogaa inkastoo aan ka niyab jabay haddana waxaan maara u waayey nafteyda oo ah in ay ka qalbi goosato wiilkaan, runtii wiilkaan wax aan illaa hadda u bandhigtay ma jiraan laakiin waxaana nahay dad isku fiican maadaama aan qurbo joogno waan is weheshanaa mar mar qolkeena ayuu yimaadaa waxaana halkaan ku galnaa sheeko iyadoo ay na wehliyaan gabdho kale mar mar waxaan isl aadnaa magaalada hoose gaar ahaan xilliyada aan soo adeegano. Si walbaba jaceylka aan xaggiisa u qabo waxaan ka dareemayaa qalbigeyga waana mid mug weyn, haddaba sideen wax yeelaa ma wiilkaan ayaan ka haraa ugana haraa xaaskiisa darteeda mise waan u bandhigtaa xanuunka i haya ???? Waxana bahda xayaati.com iyo asxabata ku taxan ka codasanayaa in ay igu caawiyaan taladooda waxaa suura gal in aan aragti iyo wax in anfacaya ka helo.
Bahda Xayaati.com ayaa ku siineysa talaadaan gaaban waana filiyenaa in asxaabta kalana iyana ay ku sii raacin doonaan. Safiyo sideedaba adduunyadu waa sida filim musalsal ah maalinba dhanbuu aadaa Jaceylkuna waa qeyb ka mid nolosha aadanaha wuxuuna soo jiray tan iyo Uumistii Nebi Aadam (CS) iyo Ayeeyo Xaawa waxaana maalinba maalinta kadambeysa sii dhaxlaayey jiilka cusub wuxuuna soo gaarey illaa waqtiga kan iyo in adigana uu ku soo weeraro.
Si aad uga guul gaarto jaceylkaaga sameey qodobadaan hoose: isku day in aad marka hore wiilka u muujiso dareemaha si hoos hoose ah adigoo ku lifaaqaya hadalkaaga iyo dhaqankaaga waliba ka dhig mid labadiina kaliya ah. Si geesinima leh ugu sheego wiilka jaceylka aad u qabto waxaana laga filayaa in uu kaa aqbalo waayo waa ruux akhyar ah oo dareemi kara nafaha kale dareenkooda Haddii ku dhaho xaas ayaan leeyahey u sheeg in aad ku qanacsan tahey baneynta uu EEBE ragga u baneeyey xaasaska badan Dabcigaaga ka dhig mid ku saleysan akhyaarnimo iyo dhaqanka suuban ee gabdhaha Soomaliyeed Waxaan jeclahey in aad ku dhaqmi doonto taladaan misana ay ku qanac gelisay, waxaan kuu rajeyneyna kheyr iyo guul Insha-Allah.